hatsaraina ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra nampisahanin’ny fitondram-panjakana izany sady mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena misahana ny tetikasa fanitarana tanàna, Gérard Andriamanohisoa. Raha ny vinavina dia tokony hifarana ny fisasahan’ny volana martsa ho avy io izay tetiandro izay mialoha ny hirosoana amin’ny tena asa fananganana ny kianja. Tsiahivina hatrany moa fa 18 volana no natao hamitana tanteraka ity kianja vaovao fandraisana lalaom-pirenena sy iraisam-pirenena ho an’ny taranja baolina kitra etsy Mahamasina izay hiova ho kianja Barea ity ny anarany rehefa vita tanteraka. Mbola ao anatin’izay dingana fandravana ny kianja izay ankehitriny isika, hoy hatrany ny tompon’andraikitra. Ny volana jona kosa no heritreretina fa efa afaka handray lalao ny kianja.